Dad si dhumaalaysi ah maandooriye usoo galiya Degaanka Darusalaam oo la qabtay (dhegayso) – Radio Daljir
Dad si dhumaalaysi ah maandooriye usoo galiya Degaanka Darusalaam oo la qabtay (dhegayso)
Janaayo 20, 2018 3:27 g 0
Deegaanka Daarusalaam oo kuyaala ilinka hore ee laga soo galo xadka u dhaxeeya Itoobiya iyo Puntland kuna dhaw Degmooyinka Buursaalax iyo Goldogob ayaa waxaa lagu xiray halkaasi rag si dhuumaalaysi ah deegaanka u soo galiyay Muqaadaraad isugujira Qamri iyo xashiishad.
Deegaanka ayaa waxaa ka socday maalmahan Howlgalo lagu xaqiijinayo Amniga loogana hortagayo shabakad sida dhuumalaysiga ah u soo galiya deegaanka waxyaabaha maanka dooriya sida Qamriga iyo Xashiisada.
Sidookale Deegaanka ayaa waxaa ka socday Howlgal kale oo isna lagula dagaalamaayay Xaalufka dhirta jarista ee Deegaanka .
Dadkan lagu sooqabtay Muqaadaraadka iyo sidookale Howlaglka Xaalfuka dhirta ayaa waxaa la horgeeyay Maxkamada deegaanka waxaan laguriday Xukun.
Hadaba Xiiray Salaad Gamacdiid. Waa Gudomiyaha Deegaanka Daaru-salaam Wariye xasan Heykal oo Qadkla Telfoonka kula xiriiray ayaa Uguhorren Waydiiay xiliga ay Howlgalka Bilaabeen .
Farmaajo oo gaaray Caabudwaaq